Lily Gladstone naLeonardo DiCaprio ku Star muMartin Scorsese Apple TV + Movie | Ndinobva mac
MunaEpril wegore rapfuura, pakati pehosha, Martin Scorsese aive kutsvaga mari yemufirimu wake unotevera, firimu iyo, senge yapfuura, yaive nebhajeti padyo nemamirioni mazana maviri emadhora uye sezviri pachena paNetflix, vaive vasiri vebasa. Mumwedzi mumwe chete, Apple yakasvika pachibvumirano chekugadzira bhaisikopo rake idzva Mhondi dzeRuva Mwedzi.
Iyi firimu yaizove naLeonardo DiCaprio semutambi mukuru, asi panguva iyi zvaisazivikanwa kuti ndiani angave mutambi anotungamira. Zvinoenderana nechinyorwa Kusiyana-siyana, Lily Gladstone anga ari mutambi akasarudzirwa uve chikamu chevakakanda naDiCaprio mune inotevera Martin Scorsese firimu, iyo inotanga kuratidzwa paApple TV +.
Pamusoro paLeonardo DiCaprio naLily Gladstone, tinowanawo Robert De Niro mumutambo. Lily achatamba mutambi Mollie Burkhart, mudzimai waErnest Burkhart, basa rinoitwa naDiCaprio. Robert De Niro achaita basa rababamunini vaErnest. Lily Gladstone mutambi wenhau akazvarwa muna 1986 inozivikanwa kubva mumabhaisikopo Vamwe Vakadzi (naLaura Dern), yezvikamu Mabhiriyoni uye bhaisikopo Chekutanga Gungu.
Iyi firimu nyowani yakagadzwa muK Oklahoma muna 1920 uye inodzokorodza ichangobva kugadzirwa yeFBI kuferefetwa kwakawanda kwekuuraya kwevaOsage maIndia, avo vakapa kodzero dzekushandisa mafuta akawanikwa munyika dzawo. Iyo bhaisikopo iri Kubva pane inoverengeka naDavid Grann.
Parizvino, isu hatizive kuti zuva rekuburitswa kweiyi firimu nyowani richava rei, asi kana rikadaro, zvingangoita kuti ichatanga kupinda mumitambo, kunyanya muUnited States nekuda kwechibvumirano chakasvikwa naApple na Paramount kuitira kuti sarudza iyo firimu indasitiri mibairo, ichisvika nguva pfupi yapfuura Apple TV + mahara zvachose.
Kwakasiyana masosi anoti bhajeti remufirimu uyu rakafanana neIrishman, firimu iro inodhura mazana maviri emamiriyoni emadhora, yakawanda, ingave Apple kana imwe vhidhiyo yekushambadzira sevhisi inoigadzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Lily Gladstone naLeonardo DiCaprio kutamba nyeredzi mufirimu yaMartin Scorsese yeApple TV +